Hogamiye Farmaajo oo ku baaqay in la gacan-qabto Qoysaska…
By axadle Last updated May 23, 2020
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kahadlay Munaasabadda Ciidul Fitriga oo manta ay ku dhawaaqday Wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diinta XFS in ay tahay maalinta 1-aad.
Dhammaan Ummadda Soomaaliyeed waxa uu ugu hambalyeeyay Curashada Bisha Shawal oo ah oo maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga, waxaana alle uu ugu baryay in uu Muslimiinta ka aqbalo Acmaasha Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ee ay ugu dulqaateen bandawgii lagu soo rogay dalka ee lagu ilaalinayey badqabka caafimaad ee dadka, gaar ahaan Bisha Ramadaan oo caadi ahaan uu kordho culeyska nololeed.
“Waxaan idin xasuusinayaa in farxadda maalmahan barakaysan ee Ciidda aynu si gaar ah ugu istaagno la shaqaynta laamaha caafimaadka, si buuxdana ugu hoggaansanno talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo bulshadeenna” ayuu yiri Hogamiye Farmaajo.
Hogamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabadda Ciiddan waxa uu si gaar ah ugu hambalyeeyay Ciidamada, isaga oo ku bogaadiyey dadaalka muuqda ee ay ku dardar geliyeen amniga iyo nabadgelyada intii lagu guda jiray bisha barakaysan.
“Ciidamadeenna geesiyaasha ah waxa ay xaqiijiyeen in shacabka Soomaaliyeed ay nabad iyo xasillooni ku gutaan cibaadada iyo acmaashii bishii barakeysnayd ee Ramadaan, guud ahaan dalka, gaar ahaan Caasimadda Muqdisho oo sanaddo badan kaddib ay shacabkeennu ku soomeen kuna afureen nabad” Sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha DFS.
Hogamiye Farmaajo ayaa kula dardaarmay dadka Soomaaliyeed in farxadda Ciidul Fidriga awgeed uu qof kasta gacan ka geysto farxad gelinta dadka tabaaleysan, ka shaqeynta danta guud oo amnigu ugu horreeyo, midnimada iyo wadajirka, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka.
Waxaa jira dad ku sugan Magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka oo Sooman, kadib markii xalay Fiidkii Wasaaraddu ku dhawaaqday in la dhammeystirayo Bisha Soon, inkasta saq dhexe Wasaaraddu shaacisay in Bisha la arkay, sidaas awgeed Maanta oo Sabti ah ay tahay maalinta koowaad ee Bisha shawaal sanadka 1441 Hijriya.